Tranoko 3 - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Cleanaway dia miasa amin'ny serivisy fanodinana sy fako ao an-trano ho an'ny mponina ao amin'ny Côte d'Afovoany NSW amin'ny anaran'ny Filan-kevitry ny Central Coast.
Ho an'ny ankamaroan'ny mponina dia rafitra telo-bin, ahitana:
Toby fako fako 140 litatra mena XNUMX litatra angonina isan-kerinandro
Ireo daba ireo dia tonga amin'ny karazany samihafa mifanaraka amin'ny filan'ny mponina isan-karazany ao amin'ny faritr'i Central Coast. Ohatra, ny trano any andrefan'ny Sydney mankany Newcastle M1 Pacific Motorway dia tsy manana serivisy fanasan-javamaniry ho an'ny zaridaina ary ny trano fonenana maromaro dia mety hizara koba betsaka kokoa ho an'ny fako sy fanodinana azy. Ho an'ny sarany kely isan-taona, ny mponina dia afaka mahazo fanodinana fanampiny, zaridaina sy zava-maniry na dabam-pako ankapobe na hanavao ho daba mena lehibe kokoa ho an'ny fako ankapobeny.
Tsidiho ny Biby fanampiny pejy hianarana bebe kokoa.
Esorina amin'ny andro iray ihany isan-kerinandro ny dabanao, ka esorina isan-kerinandro ny dabam-pako amin'ny ankapobeny ary ny dabam-boankazo fanodinana sy zaridaina mandritra ny roa herinandro mifandimby.
Tsidiho ny Andro fanangonana Bin pejy hianarana rehefa foanana ny dabao.
Raha te hahalala izay azo apetraka amin'ny daba tsirairay dia tsidiho ny anay Toeram-pisakafoanana, Tranon-javamaniry zaridaina ary Fako fako ankapobeny pejy.
Torolàlana momba ny fametrahana Bin
Ireo mpamily kamiao Cleanaway ao amin'ny morontsiraka Afovoany dia manolotra kodiaran-kodiarana maherin'ny 280,000 isan-kerinandro manerana ny morontsiraka Afovoany, ary ny ankamaroan'ny mpamily dia manary koba 1,000 mahery isan'andro.
Ireto dingana manaraka ireto dia tokony harahina rehefa mametraka daba ho an'ny fanangonana:
Tokony hapetraka eo amin'ny sisin-dalana (fa tsy ny tatatra na ny lalana) ny takariva alohan'ny andro fanangonana
Ny dabam-pako dia tokony ho tazan-davitra tsara ny lalana ary ny tahony dia mitodika lavitra ny lalana
Mametraha elanelana eo anelanelan'ny 50cm sy 1 metatra eo anelanelan'ireo dabam-pako mba tsy hifandonan'ny kamiao mpanangona ireo dabam-pako ka handondona azy ireo.
Aza fenoina loatra ny dabanao. Tokony hikatona tsara ny sarony
Aza asiana kitapo na amboara fanampiny eo akaikin'ny dabanao fa tsy azo angonina
Ataovy azo antoka fa tsy misy hazo mihantona, boaty mailaka ary fiara mijanona ny daba
Ataovy azo antoka fa tsy mavesatra loatra ny kobanao (tsy maintsy milanja latsaky ny 70kg izy ireo raha manangona)
Atokana ho an'ny trano tsirairay ny daba. Raha mifindra ianao dia aza mitondra ny dabam-bary miaraka aminao
Esory eo amin'ny sisin'ny sisin-dalana ny kobanao amin'ny andro fanangonana rehefa avy nokarakaraina